Min: mpizaha tranonkala open source minimalist | Avy amin'ny Linux
kaonty miaraka amin'ireo fiasa fototra rehetra ao anaty tranokala, izay ampiasain'ny mpampiasa mahazatra. Mampiavaka azy ny famaliana eo noho eo satria ny valin'ny fikarohana dia mamaly fanontaniana avy hatrany, Fahazoana ny fampahalalana nomen'ny motera fikarohana DuckDuckGo.
kaonty miaraka amina interface tsara somary madio sy mora ampiasaina. Min dia ahafahanao manamboatra milina fikarohana toy ny Google, Bing ary Yahoo.
ihany koa manana ny fampidirana fiasa manakana doka izay mamela ny mpampiasa hisafidy ny hijery ireo doka na tsia.
Toy izany koa, rehefa manana fifandraisana voafetra na lafo be ny mpampiasa. Min dia mamela anao hanakana ny script sy ny sary amin'ny fampiasana angon-drakitra kely kokoa noho izany mampitombo ny hafainganan'ny pejy.
Mamela ny fananganana tabilao, fisintomana ireo vakizoro manodidina ny tranokala, mandatsaka azy ireo, mandamina azy ireo ary maro hafa.
Ho fanampin'izay, mila loharanom-pahalalana vitsivitsy ny browser raha oharina amin'ireo mpitety tranonkala malaza sasany izay mampiasa maro hafa.
Azontsika lazaina izany Min dia mpitety tranonkala izay manampy amin'ny fampihenana ny fampiasana angovo mandritra ny fotoana fitetezana tranonkala, mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny solosaina finday.
Entre ny mampiavaka azy Min:
Fampahalalana DuckDuckGo ao amin'ny bara fikarohana.
Doka namboarina sy fanakanana ny Tracker
Fikarohana an-tsoratra feno ho an'ny pejy notsidihina
Misokatra miankavanana ny vatan'ny fanamafisana kapoka ary manjavona rehefa tsy miasa.
Manana lohahevitra maizina izy io
Fifanarahana mpampiasa minimalista
Manome maody fifantohana dia mamela anao hifantoka amin'ny kiheba ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanafenana ireo kiheba hafa.
Famoronana kiheba sy asa.
Fitantanana tsoratadidy tsotra.
Fanaraha-maso ny famakiana.
Fanohanana ny script amin'ny style.
Fanohanana HTML5 ao amin'ny YouTube.
Fanohanana ho an'ny Adobe Flash.
1 Ahoana ny fametrahana Min amin'ny Debian9, Ubuntu 18.04 ary ny derivatives?
2 Ahoana ny fametrahana Min amin'ny Arc Linux, Manjaro ary ny derivatives?
Ahoana ny fametrahana Min amin'ny Debian9, Ubuntu 18.04 ary ny derivatives?
Raha te-hametraka ity mpizaha ity amin'ny rafitra fiasa izahay dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto. Voalohany, Tsy maintsy manokatra terminal Ctrl + Alt + T izahay ary hampidina ity fonosana manaraka ity raha te hametraka ny browser.
Hanohana ny tenantsika amin'ny alàlan'ny wget ho an'ny fisintomana izahay, noho izany dia soratinay:
Si mampiasa rafitra miaraka amina marindrano 32-bit ilay fonosana izay tsy maintsy alainao izao manaraka izao:
Efa nahavita ny fisintomana, azontsika atao ny mametraka ny fonosana vao azony miaraka amin'ny mpitantana fampiharana tianay.
Na amin'ny terminal misokatra iray ihany manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay hametrahana azy.
Para ny fonosana 64-bit:
Para ny fonosana 32-bit:
Ahoana ny fametrahana Min amin'ny Arc Linux, Manjaro ary ny derivatives?
Ho an'ny mpampiasa Arch Linux, Manjaro na ny derivative sasany amin'ireny dia sambatra isika fa ny mimari-droa browser dia ao anatin'ny tahiry AUR, izay hanohanantsika ny tenantsika hahafahantsika mametraka azy amin'ny fomba tsotra ao amin'ny rafitray.
Ho an'ity Tsy maintsy manana ny tahiry AUR afaka ao amin'ny rakitra pacman.conf izahay, hanokatra terminal izahay ary hampihatra an'ity baiko ity hametraka ny browser:
Ary mamaly izahay fa tsy te-hanitsy ny rakitra fanangonana, fa raha te-misintona sy manangona azy izahay ary amin'izany dia angatahina amin'ny tenimiafinay mba hampiakatra ireo tombony ary apetraka ny browser.
Ho an'ny sisa amin'ny fizarana dia tsy maintsy ampidinintsika ny kaody loharano browser avy amin'ny ity rohy manaraka ity.
Ary tsy maintsy manangona azy io isika mba hahafahantsika mankafy azy ao amin'ny rafitrtsika.
Raha vantany vao vita ny fametrahana dia afaka mitady Min ao amin'ny menio fampiharana izahay mba hahafahantsika mampandeha azy ary manomboka mampiasa azy.
Raha fantatrao ny momba ny navigateur minimalist hafa azontsika resahina, aza misalasala mizara izany aminay amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Min: Mpizaha tranonkala open source minimalista